Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izindaba Zocingo » Ukukhumbula Ukudla Okuphuthumayo Kwe-Tiger Nuts Ye-Salmonella Evela Ekutheleleni Kwegundane
I-African Foodways Market ikhumbula amanye ama-Tiger Nuts aphinde apakishwa emakethe ngenxa yokungenwa ukungcoliswa yi-Salmonella okuvela ekuhlaselweni kwamagundane.
Umkhiqizo obuyisiwe udayisiwe e-Manitoba.
• Uma ucabanga ukuthi ugule ngenxa yokuphuza umkhiqizo obuyiselwe emuva, shayela udokotela wakho
• Hlola ukuze ubone ukuthi unawo yini umkhiqizo obuyisiwe ekhaya lakho
• Ungawusebenzisi umkhiqizo obuyiselwe emuva
• Unganikezi, usebenzise, ​​udayise, noma usabalalise umkhiqizo obuyisiwe
• Imikhiqizo ebuyiselwe emuva kufanele ilahlwe ngaphandle noma ibuyiselwe endaweni lapho ithengwe khona
Ukudla okungcoliswe i-Salmonella kungase kungabonakali noma kunuke konakale kodwa kusengakugulisa. Izingane ezincane, abesifazane abakhulelwe, asebekhulile kanye nabantu abanamasosha omzimba abuthakathaka bangase bangenwe izifo ezimbi kakhulu futhi ngezinye izikhathi ezibulalayo. Abantu abanempilo bangase babe nezimpawu zesikhashana ezinjengomkhuhlane, ikhanda elibuhlungu, ukuhlanza, isicanucanu, amajaqamba esiswini kanye nesifo sohudo. Izinkinga zesikhathi eside zingase zihlanganise isifo samathambo esinzima.
• Funda kabanzi mayelana nezingozi zezempilo
• Bhalisela ukukhumbula izaziso nge-imeyili bese usilandela ezinkundleni zokuxhumana
• Buka incazelo yethu eningiliziwe yocwaningo lokuphepha kokudla nenqubo yokubuyisa
• Bika ukuphepha kokudla noma ilebula
Lokhu kukhumbula kuqalwe ukudluliselwa kwe-Saskatchewan Health Authority.
Azikho izifo ezibikiwe ezihlobene nokusetshenziswa kwalo mkhiqizo.
I-Canadian Food Inspection Agency (CFIA) yenza uphenyo lokuphepha kokudla, olungase luholele ekubuyiselweni kweminye imikhiqizo. Uma eminye imikhiqizo enobungozi obukhulu ikhunjulwa, i-CFIA izokwazisa umphakathi ngezixwayiso ezibuyekeziwe zokukhumbula ukudla.
I-CFIA iqinisekisa ukuthi imboni isusa umkhiqizo okhunjulwe emakethe.
Isikhungo Sokuhlola Ukudla KwaseCanada Impilo Igundane Salmonella Saskatchewan Tiger
Meyi 1 Isitatimende seWorld Tourism Network
I-Young-Onse Dementia ethinta abantu abangaphezu kuka-1200
Imakethe ye-Medical Nitroglycerin Sprays kulindeleke ...
Iqhawe Elisha Lezokuvakasha, kanye Nesimangaliso Sosuku Lokuzalwa Lweminyaka engama-80